PSJTV | फ्याङ्ग्रे
बिहिबार, २४ साउन २०७५ पिएसजे टिभी
शहरकै बीच शहरको चमकले छुन नसकेकाे याे ठाउँ। केही समय अगाडीसम्म घाँसेमैदानले ढाकिएकाे याे स्थानमा विस्तारै घरहरू बढ्दैछन् र मानवीय चहलपहलपनि। नजिकै छ नख्खु खाेला। जुन बग्छ दक्षिणबाट उत्तरतिर। याे खाेलाकाे यही हाे विशेषता। प्रायः नेपाली नदीहरू उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्नेगर्छन्। यसकाे प्राचिन् महत्व रहेकाे छ। यसलाई प्राचिन् कालमा प्रभावती भनिन्थ्याे।
यही खाेलाकाे छेवैमा थुप्रै टहराहरू छन्। जहाँ थुप्रै मानिसहरूका अाश्रयस्थल बनेका छन्। यहाँ जाेकाेही गएपनि निकै कडा गन्ध अाएकाे महसूस गर्छन् किनकि यहाँ सुङ्गुर पालन व्यवसाय गरिन्छ। याे टहरे बस्तीकाे यहीनै मुख्य व्यवसाय हो। यसरी मानवीय चहलपहलले नख्खु खाेला मैलिंदै गएकाे छ।
सुङ्गुरखाेर पहिलाेपल्ट जाने मान्छे त अवश्यनै घिनाउनेछ। दाना र लिदिकाे थुप्राे र गन्धले तर्सनेछ। तर याेनै सुङ्गुरहरूकाे सिङ्गाे संसार हाे। यहीं बढ्छन्, काटिन्छन् अनि मासु बन्छन्। र घरघरकाे मिष्ठान्न भाेजन बन्छन्।
यही बस्तीमा, अलि खाेलाकाे डिलैमा छ एउटा सुङ्गुरखाेर। याे काइँला दाइको सम्पत्ति हाे। उनी हरेक बिहान ५ बजे साईकल चढेर दाना लिन केही परकाे बजार पुग्छन्। अनि खाजा-खानाका दाेकानहरूमा फाेहाेर खानेकुरा साईकलभरि राखेर फर्कछन्। पहिले खोरको लिदि र पुराना चाराेहरू सफा गर्छन् अनि चाराे हालिदिन्छन्। सुङ्गुरहरू तछाडमछाड गर्दै चाराे खान्छन्। सबै सुङ्गुरहरू कालाे रङ्गका छन्।
काइँला दाइकाे करिब ८० वर्षका बाबु छन्। अग्लाे कद र ठूलाे अनुहार। सधैं ढाका टोपी र दाैरासुरूवाल लगाउने। लठ्ठी कहिल्यै नछाेड्ने उनी फरासिला स्वभावका छन्। अलि कान कम सुनेपनि बाेल्न खुब मन पर्छ उनलाई। छाेरा नहुँदा याे खाेरकाे हेरचाह गर्ने उनीनै हुन्। उनकाे बायाँ खुट्टा अलि बाङ्गाे छ। हुन त गाउँमा छँदै रूखबाट लडेर खुट्टा बिग्रेकाे हाे तर जिस्केर दाेस्राे विश्वयूद्धमा गाेली लागेकाे भन्छन् उनी। उनकाे बेलायती सेनामा भर्ती हुने ठूलाे सपना थिएछ पहिले तर खुट्टाले धाेका दिएकाे रहेछ।
काला सुङ्गुरहरू खाेसाखास गरेर चाराे खाँदैगर्दा एउटा निकै ठूलाे र बुढो सुङ्गुर अलि पर घाम तापेर बसेकाे थियाे। याे पुसको महिनामा खाेलाकाे तीरमा निकै जाडाे छ। केहीपछि त्याे बिस्तारै उठेर अायाे। यसकाे पछाडीकाे बायाँ खुट्टा अलि बाङ्गाे छ। खाेच्याउँदै डुँडनजिकै याे पुग्दा अचम्मै तरिकाले अरू सुङ्गुरले यसलाई ठाउँ छाेडिदिए। अनि यसले चाराे खानथाल्याे। घ्वाँ गरेर यसले अाफ्नाे बुढो मालिकलाई बाेलायाे। उनी मुस्कुराए। याे सुङ्गुरकाे नाम फ्याङ्ग्रे हाे र काइँला दाइकाे बुबाकाे प्रिय। यसले चाराे खान लाग्दा अरू सबै सुङ्गुरले ठाउँ छाडिदिएकाे देखेर सबै मान्छेले अचम्म मानेर हेर्थे। त्यसैले याे सुङ्गुरखाेर अरूभन्दा अलिक चर्चित छ याे टाेलमा।
चाराे खाएपछि फ्याङ्ग्रे बुढो मालिककाे अगाडी गएर घ्वाँ-घ्वाँ गरेर करायाे र अाफ्नाे ठुटे पुच्छर हल्लायाे। मालिकले पनि यसकाे गर्धन केहीबेर मुसारिदिए। अनि याे खुशी भएर अाफ्नाे पहिलेकै ठाउँमा गएर पसारिएर सुत्याे, घाम तापेर। फ्याङ्ग्रेले खाइसकेपछि अरू सुङ्गुरले चाराे खान थाले।
सुङ्गुरखाेरकाे याे दुनियाँमा फ्याङ्ग्रेकाे सान र इज्जत छुट्टै छ। याे सबै सुङ्गुरहरूकाे पूज्य र अादरणिय छ। त्यसैले यसले चाराे खान लाग्दा अरूले ठाउँ छाडिदिएकाे हाे। याे त्यतिसाराे बाेल्दैन। सदा माैन व्रत बस्न रूचाउँछ। कुनै सुङ्गुरले बाेलाउँदापनि टाउकाे हल्लाएर मात्र जवाफ दिन्छ। खासै अरू सुङ्गुरले यसलाई बाेलाउने अाँटै गर्दैनन्। तर बेलाबेला याे सबैलाई अाफ्नाे छेउमा डाकेर निकै लामाे भाषण छाड्ने गर्छ। भाषण दिनेबेला याे अाफ्नाे सम्पूर्ण ज्ञान प्रदर्शन गर्छ किनकि अाफूलाई याे अरू सुङ्गुरभन्दा विद्वान् ठान्ने गर्छ। अनि सारा दुनियाँ देखेजसरी गफ दिनेगर्छ । हुन त अरू सुङ्गुरहरूलाई पनि के थाहा? सबै यही खाेरमा जन्मेर हुर्कन्छन् अनि काटिन्छन्। उनीहरूकाे बाँच्ने अायु प्रायः ६ महिना त हुन्छ।यति छाेटाे अायुमा, याे सानाे खाेरमा यी विचराहरूले के बुझुन् र!
अाजपनि जब हिउँदकाे पारिलाे घाम दिउँसाे लाग्याे, अनि काेही नभएकाे बेला फ्याङ्ग्रेले सबै सुङ्गुरहरूलाई अाफ्नाे नजिक बाेलायाे। १० वटा साना सुङ्गुरहरू उसकाे कुरा सुन्न दाैडँदै नजिकै गएर अदवसाथ बसे। पछिपछि एउटी सुङ्गुर्नीपनि अाई, त्यसकाे नाम पुन्टी थियाे। साथै अर्काे ब्याउने भएकि सुङ्गुर्नीपनि विस्तारै अाई, यसलाई साइँला दाइ भु्न्टी भन्थे। जब सबै चुपचाप फ्याङ्ग्रेको अगाडी बसे, उसले सबैकाे उत्सुक अाँखामा एकपटक हेर्याे अनि लामाे हाइ तानेर बाेल्नथाल्याे। ऊ बाेल्नुअगाडी 'अाहा' शब्दबाट सुरू गर्थ्याे। यसले अाहा शब्द प्रयाेग गर्नुकाे कारण साइँला दाईको बाबुले यसलाई यही शब्द प्रयाेग गरेर बाेलाउने गर्थे।
'अाहा, सुन सबैजनाले, अाज म मेराे ज्ञानकाे केही कुरा सुनाउँछु। मेराे नाम अामाले सानाेमा अर्कै राख्नुभएकाे थियाे तर मलाई मेराे बुढा मालिकले फ्याङ्ग्रे राखिदिए। याे नाम मलाई असाध्यै मनपर्छ। मेराे पुरानाे नाम त मैले बिर्सिनै सकें। र फ्याङ्ग्रेकाे अर्थपनि थाहा छैन, बस् मलाई मनपर्छ।'
'अाहा, अनि हामी काला जातिका सुङ्गुर हाैं। याे बुझ्नू तिमीहरूले। हाम्रो मासुकाे माग ठूलाे छ। सेताे सुङ्गुरकाे मासुभन्दा हाम्राे मन पराउँछन् मान्छेहरू। अनि हाम्राे घर पूर्वी नेपाल हाे। हाम्राे माग ठूलाे भएकाेले हामीलाई यहाँ ल्याइएकाे हाे।'
'अाहा, हामी सुङ्गुर जातिकाे अायु निकै कम हुन्छ। करिब ६ महिनाकाे। अनि हामीलाई काटेर मासु बनाइन्छ। तर हामी मासु बन्न पाउनु हाम्राे गाैरवकाे कुरा हाे। हाम्राे जातिकै गाैरव। तर मेराे र मेराे बुढो मालिककाे खुट्टा उस्तै भएर मलाई अझैसम्म ज्यूँदै राखिएकाे हाे। उनकै जिद्दिले मेराे अायु लामाे भएकाे हाे। म ४ वर्ष ६ महिना १३ दिनकाे भएँ। याे पुन्टी २ वर्षकि र त्याे भुन्टि डेढ वर्षकि भई। मनै हाम्राे जातिकाे इतिहासमा कालगतिले मर्ने भएकाे छु। यतिनै हाे मेराे सन्तुष्टिकाे कुरा तर याे दुनियाँमा लामाे अायु राम्राे हैन बच्चाहरू। मानिसहरू धर्म, जात, पैसा अनि रूपकाे लागि युद्ध गर्छन्। तर मलाई धर्म, जात, पैसा र रूपकाे अनि युद्धकाे केही अर्थ थाहा छैन। यी त मैले बुढो मालिकबाट सुनेकाे हुँ। तर मानवीय समाज मलाई त्यति मनपर्दैन। बरू मासु बन्नु नै राम्राे हाे हाम्राे लागि।'
'अाहा, अहिलेपनि संसारकाे थुप्रै स्थानमा लडाइँ चलिरहेकाे छ रे। सायद सबै मान्छेकाे मासु बन्छ हाेला उनीहरूको मृत्युपछि। हाम्राे जातिमा युद्ध भन्ने हुन्न। मैले बुढो मालिकले बेलाबेला मान्छेभन्दा त यही सुङ्गुर राम्राे, भनेकाे सुनेकाे छु। त्यसैले तिमीहरू खुशी हाेअो।'
सबै सुङ्गुहरू उत्सुक भएर सुन्दैथिए। त्यसैबेला ठूलाे ट्रक धूलाे उडाउँदै जाेडले कच्ची बाटाेमा कुद्छ।
'अाहा, मलाई लामाे अायु दिनुका साथै खशीपनि पारिएन। त्यसैले मलाई वीर भनिन्छ। तर मलाई सन्तान उत्पादन कार्यमा सामेल हुनबाट राेकियाे। मैले सुनेअनुसार मेराे खुट्टाकाे कारणले हाे रे। त्याे कारणले गर्दा म निकै दुःखी भएँ। तर एक दिन यही भुन्टिकि अामाले मसंग सहवास गरी। मेराे तीक्ष्ण बुद्धि र विशाल ज्ञान देखेर। म उप्रति कृतज्ञ छु सधैं। उसले कसैले नदखेको बेला मसंग त्यस्ताे सम्बन्ध राखी नत्र त मलाई त्यस्ताे कार्य गर्ने अनुमति दिइँदैनथ्यो। असती मान्छेहरू उनीहरूचाहिं सधैं भाेगविलासमा रम्छन् रे। भुन्टिकाे अामाकाे नाम डल्ली थियाे। हाम्रा मालिकले उसलाई ३ महिनाअगाडी अन्तै बेचे। उसकाे मलाई खूब याद अाउँछ। याे जुनीमा हाम्राे भेट कहिल्यै हुन्न।'
याे सुनेर सबै सुङ्गुरहरूका अाँखा रसाए। यसैबेला ठूलाे हवाईजहाज जाेडले अावाज निकाल्दै उड्दै गयाे।
'अाहा, हामीलाई केही मानव समुदायले मन पराउँदैनन्। हाम्राे मासुपनि खाँदैनन्। कतिले त छुँदैनन् र नामपनि लिंदैनन् हाम्राे। तर हामीलाई मन पराउने र हाम्राे मासु खाने धेरै छन् याे दुनियाँमा, त्यसैले चिन्ता गर्नु पर्दैन तिमीहरूले बाबुनानीहरु हो। हाम्राे मृत्यु चाँडै हुने भएकाेले हामीले सक्दाे धेरै खाने र सुत्ने गर्नुपर्छ। खानु र सुत्नु नै हामी सुङ्गुरजातिकाे ठूलाे स्वतन्त्रता र अानन्द हाे।'
याे अन्तिम कुरा सुनेर सबै सुङ्गुरहरू रमाए।
त्यसैबेला साइँला दाइ अाइपुगे अनि बेलुकाको लागि चाराे तयार पार्नलागे। अाज उनकाे बाब सदाझैं अाएनन्। भाेलि पहाडघर जाने भएकाेले तयारी गर्दैथिए उनी। फ्याङ्ग्रे निकै भावुक भयाे अाफ्नाे बुढो मालिकलाई नदेखेर।
अाज सबै सुङ्गुरहरूले धेरै चाराे खाए, सकेसम्म अनि खूब सुते रातभर। याे देखेर फ्याङ्ग्रे निकै खुशी भयाे र अानन्दले निदायाे उपनि। जून पूर्ण गाेलाे भएकाे थियाे अाकाशमा।
बिहानै बुढो मालिक हिंडे, गाडी चढेर गाउँतिर। अाजपनि उस्तै रह्याे खाेरकाे अवस्था तर अाज सुङ्गुरहरूले अलि बढीनै चाराे खाए र सुतेकाे सुत्यै गर्न थाले।
दिउँसाे साइँला दाइसंग दुईजना मान्छे अाए। अनि अागाे बाल्न थाले। सबै सुङ्गुरहरूले छक्क परेर हेरिरहे। कसैले केहीपनि बुझेनन्। खासमा अाज अाफ्नाे बाबु नभएकाे बेलामा साइँला दाइ फ्याङ्ग्रेलाई मार्न अाएका थिए। चाराेमात्र धेरै खाने, बेच्नपनि खासै नमिल्ने र पाेथीलाई पनि वीर लगाउन नमिल्ने भएकाेले यसलाई काटेर मासु बेचि थाेरै दाम भएपनि कमाउने उनकाे सूर थियाे। बाबुकाे जिद्दिमा कतिसम्म पाल्नु भनेर उनी दिक्क भैसकेका थिए।
अागाे बलिसकेपछि ठूलाे भाँडाेमा पानी तताउन थाले। अनि साइँला दाइ लामाे भाला लिएर खाेरभित्र पसे। अरू सुङ्गुरहरू सबै भागे। फ्याङ्ग्रे सुतिरहेकाे थियाे, ऊ उठेन एउटा अाँखा मात्र खाेलेर हेर्याे उसले। तर साइँला दाइले उठाएरै छाडे। ऊ छक्क परेर उभिरहेकाे थियाे। त्यसैबेला उसकाे छातीमा भाला प्रहार गरे दाइले। पहिले फ्याङ्ग्रे तर्स्याे र ठूला स्वरमा पीडाले च्वाँ... गरेर करायाे त्याे तर पछि अानन्दित भयाे किनकि त्याे चाँडै याे दुनियाँ छाेड्दै थियाे। केहीबेर छट्पटाएर मर्याे ऊ।
परबाट अरू सुङ्गुरहरूले छक्क परेर हेर्दैथिए। केही बुझेनन् तिनीहरुले। केहीबेरमै फ्याङ्ग्रे टुक्राटुक्रा भयाे अनि सुङ्गुरजातिमा कालगतिले मर्ने इतिहासपनि टुक्राटुक्रा भयाे फ्याङ्ग्रेसँगै।
(यसअघि लेखकको 'साहित्यमा अांशिक शारीरिक दुर्बल व्यक्तिकाे अलग अायामकाे खाँचाे' शीर्षकको लेख प्रकाशित भएको थियो। यो कथा सोही लेखमा आधारित छ।)